बैंक /बित्तिय संस्था – Page5– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
कर नतिरी चुनढुंगा खानी सञ्चालनमा
- हरिहरसिंह राठौर, धादिङ दशकदेखि राजस्व नबुझाएको भन्दै वन विभागले बन्द गरेको जोगीमारास्थित चुनढुंगा खानी पुन: सञ्चालन भएको छ । उद्योगपतिको दबाबपछि विभागले नै सञ्चालनको अनुमति दिएको हो । हेटौंडालगायत सिमेन्ट उद्योगका लागि चार दशकदेखि चुनढुंगा उपलब्ध गराउँदै आएको अन्नपूर्ण क्वेरेजलाई विभागले नै सञ्चालनको गर्न दिने भएको छ । विभागले..
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा चन्द्रकान्त अधिकारी विजयी
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रिय सदस्यमा धादिङका चन्द्रकान्त अधिकारी विजयी हुनुभएको छ । काठमाण्र्डौमा जारी महासंघको ५१ औं अधिबेशनबाट अधिकारी महासंघको केन्द्रिय समितिको सदस्यमा विजयी हुनु भएको हो । अधिकारी धादिङ उद्योग वाणिज्य संघको पुर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । खुल्ला तर्फको १८ जना केन्द्रिय सदस्यमा २८ जनाको प्रतिष्पर्धा..
आयल निगमले फेरि बढायो ग्यासको भाउ
काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले ग्याँसको भाउ बढाएको छ। आयल निगमले ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको हो। अब ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर १३ सय ७५ पर्नेछ। यसअघि माघ २० गते आयल निगमले ग्यासको भाउ प्रतिसिलिन्डर १३ सय २५ बाट बढाएर १३ सय ५० पुर्‍याएको थियो। आयल निगमले भारतबाटै ग्यासको भाउ बढेर आएकाले नेपालमा पनि बढाइएको प्रतिक्रिया दिएको..
नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको दोश्रो बार्षिक साधारण सभा
३६ करोड ६५ लाख ८२ हजार सञ्चालन मुनाफा हासिल हरिश ढकाल– बुटवल, -नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेडको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा शुक्रबार बुटवलमा सम्पन्न भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ३६ करोड ६५ लाख ८२ हजार सञ्चालन मुनाफा हासिल गर्न सफल भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको सो साधारण सभाले..
मेगा र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकबीच एक आपसमा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । मेगाका अध्यक्ष भोजबहादुर शाह र टुरिजमका अध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले दुवै बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यको रोहवरमा सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मर्जरपश्चात् बैंकको नाम मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड नै कायम रहने..
गल्छीमा खुल्यो नेपाल बंगलादेश बैकको शाखा
सरकारले नयाँ शहरको परिकल्पना अघि बढाएर पुर्वाधार विकासका कार्यक्रम संचालन गर्न थालेपछि धादिङको बैरेनी गल्छीमा आर्थिक चहल पहलका कामहरु पनि बढ्न थालेको छ । पुर्वाधार विकासले गति लिन नभ्याउँदै बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले पनि गल्छीलाई रोज्न थालेका छन यसैक्रममा नेपाल बंगलादेश बैक (एनबि बैक)को शाखा गल्छीमा सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल..
शेयर बजारमा १२ करोड भन्दा बढी कित्ता शेयर आउँदै
काठमाडौं,- शेयर बजारमा केही महिना भित्रैमा १२ करोड भन्दा बढी कित्ता शेयर आउने भएको छ । बैंक, विकास बैंक, जलविद्युत तथा बीमा कम्पनीहरुको १२ करोड भन्दा बढी कित्ताको शेयर आउने भएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा परेको आवेदनका अनुसार ९ जलविद्युत कम्पनी, ४ विकास बैंक, एक वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीको उक्त संख्यामा शेयर आउन लागेको हो । यसमध्ये..
बैरेनी -धादिङको बैरेनीमा नयाँ ग्याँस उद्योगको बोटलिङ प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन व्यवासायीहरुले प्रस्ताव अघि सारेका छन । धादिङ र तनहुंमा एकै साथ दुई वटा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने गरी एनएल ग्याँस उद्योगले अनुमतिका लागि उद्योग विभागमा प्रस्ताव पेश गरेको हो । यस अघि धादिङको खानीखोला देखि मझिमटार सम्ममा १३ वटा ग्याँस उद्योगको बोटलिङ..
मूल्य घट्यो पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको
मंगलवार, श्रावन- १८, २०७३ ,काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले साढे ६ महिनापछि पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ। आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेका अनुसार पेट्रोल, डिजल र मट्टितेल सबैमा प्रतिलटर २ रुपैयाँ घटेको छ। एलपी ग्यासमा निगमले करिब एक वर्षपछि २५ रुपैयाँ घटाएको छ।मङ्गलबार साँझ बसेको निगमको बैठकले मूल्य..
यातायात क्षेत्रलाई प्रबिधिमैत्री बनाउँदै बससेवा, बससेवा अपरेटर एप्स् सञ्चालनमा
यातायात क्षेत्रलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने अभियानमा जुटेकोे बससेवा डटकमले बस व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै बससेवा अपरटरेटर एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । अनलाईनबाट बस टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको बससेवा डटकमले सञ्चालनमा ल्याएको यो एप्स्ले बस व्यवसायीहरूलाई सिट चार्ट व्यवस्थित गर्न तथा आपसमा समन्वय गर्न सहज हुनेछ । यो एप्स् प्रयोगपछि धेरै..
ग्याँस उद्योगी शिब घिमिरेलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश
सुनसरी फागुन १६ । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ग्याँस तथा सिलीण्डरको अवैध कारोवार मुद्धाको फैसलामा अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै ग्याँस उद्यागी शिबप्रसाद घिमिरेलाई मुद्या परेको छ । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अदालतको फैसलाको अवहेलना गरेको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत टिकेन्द्र विर जंग राणा समेतको कर्मचारीहरुले जिल्ला अदालतमा..
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला हुँदै
काठमाडौँ,- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजनामा आगामी चैत ४ देखि ८ गतेसम्म स्थानीय भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना हुने भएको छ । नेपाल सरकार÷वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा हुने मेलामा सहभागी हुन चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीका लागि महासङ्घले आजैदेखि..
कम्युनिष्ट गुरु’बा नमूना दुग्ध उत्पादक किसान
आफुले गरेको कामबाट अरुलाई पनि प्रेरणा मिलोस भनेर फर्म सञ्चालन गरें धादिङ, माघ ६ । धादिङ आसपासका एमाले बृत्तमा गुरुबाका उपमाले चिनिँदै आएका पुराना कम्युनिष्ट नेता जगन्नाथ नेपालको परिचय आजभोली अगुवा किसानको रुपमा परिणत भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका सञ्चालक अध्यक्ष नेपालको पछिल्लो दैनिकी समितिको काम बाहेक गाईलाई..
खै कहाँ गयो ग्यास ?
यतिबेला राजधानी मात्र होइन देशको हरेक घर, जहाँ एलपी ग्यासविना चुलो बल्दैन ती चुलाहरू आकलझुकल मात्र बल्ने गरेका छन् । मन परेको बेला भेटिने प्रेमीप्रेमिका जस्तै बत्ती पनि मन खुस भएको बेला आउँछ । त्यही मौका छोपेर साँझको खाना दिउँसै बनाउन बाध्यछन्, राजधानीबासी । कुनै बेला शोखले हुनेखानेले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यास यतिबेला आममान्छेका लागि..
मलेखुमा हुने राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा माछा महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा
धादिङ पुस ७- बिहीबारदेखी धादिङको मलेखुमा हुने राष्ट्रिय व्यापार मेला तथा माछा महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले मेला स्थल वरपरको सरसफाईलाई कार्यलाई तिब्रता दिईएको छ । मेला स्थल बेनिघाट गाँउ विकास समिति वडा नं १ मलेखुमा अहिले स्टल निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल््लाको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका लागि उद्योग,..